Maitiro ekudzima account yeTeregiramu, Emulator.online ▷ 🥇
Kutevera rairo yeshamwari yako yepamwoyo, newewo wafunga kushandisa Telegraph, iyo inozivikanwa mameseji sevhisi iyo inokutendera iwe kwete chete kutumira mameseji asiwo kutora chikamu mumapoka, tevera makwara pane akasiyana kwazvo misoro uye nekufona / vhidhiyo kufona pamusoro peInternet. Kwemavhiki, zvakadaro, iwe wakaona kuti iwe unofarira mamwe mameseji ekunyorera kuti utaure neshamwari dzako uye, nekudaro, iwe wasvika kumagumo ekumisa ruzivo rwako paTeregiramu.
Kana zvinhu zvakanyatso nyatso sezvandakavarondedzera uye zvino iwe unoda kuziva sei kudzima Teregiramu account, ndibvumire kuti ndikupe ruzivo rwese rwaunoda kuti ubudirire pane zvaunoita. Kana iwe ukandipa maminetsi mashoma enguva yako yemahara, ini ndinogona kukuratidza iyo yakajeka nzira yekudzima zvachose account yako kana kuronga kudzimwa kwayo. Chekutanga pane zvese, zvisinei, chichava chishuwo changu kutsanangura zvazvinoreva kuzvinyoresa kubva kuTeregiramu, zvichiratidzawo zvingasarudzwa zviripo kana kusahadzika.
Kana iwe uchibvumirana uye usingakwanise kumirira kuti uwane zvimwe, ngatirege kutambisa chero imwe nguva tichikurukura kuti tione mafambiro. Zvigadzikise, sarudza maminetsi mashanu enguva yekusununguka, uye zvipire pakuverenga ndima dzinotevera. Tevedza rairo dzandiri kuda kukupa zvakanyatsonaka, edza kuzviisa mukuita uye ndinokuvimbisa kuti iwe unozogona kuzvinatsa kubva kuTeregiramu usina kusangana nemhando ipi neipi yedambudziko. Kuverenga kunofadza uye rombo rakanaka mune zvese!
Maitiro ekudzima zvachose account yeTeregiramu
Maitiro ekudzima Teregiramu account otomatiki
Kana pane matambudziko
Tisati tasvika pamwoyo wedzidziso iyi uye tozvitsanangura isu pachedu sei kudzima Teregiramu account, zvinogona kubatsira kuti ubvise account yako kubva papuratifomu iyi ine, uye pamusoro pezvose, ndezvipi sarudzo zvaunazvo kuti uzviite.
Panguva yekunyora gwaro iri, unogona kudzima account yako yeTeregiramu nemaoko (nekuwana peji rakatarwa pawebhusaiti yeTeregiramu yepamutemo) kana nekumisa kudzima kwaro otomatiki (kubva pazvirongwa zveyakakurumbira mameseji sevhisi).
Muzviitiko zvese izvi, kubviswa kweakaundi yako kunoreva kubviswa kwese chats, yemunhu uye yeboka (kusanganisira mameseji uye chero nzira) nevaya vanobatana neakaunzi yakadzimwa. Zvakare, iwe unofanirwa kuziva izvo kuvhiya kwacho hakuchinji: Kana paine kusahadzika, hazviite kuti uwanezve yakanzurwa account.
Nekudaro, nekusarudza kuronga otomatiki kukanzurwa kweakaundi yako, kana iyo yekupedzisira isati yadzimwa, unogona kudzosera nhanho dzako nekungopinda muakaunti yako zvakare.
Chekupedzisira, ndinoda kunongedzera kuti kana account yako ikatemerwa nekuda kwezviitiko zvine chekuita ne spam, kuidzima hakubvise izvo zvinorambidzwa. Mushure mekubvisa izvi, ngatione kuti tingaite sei.
Kana chinangwa chako chiri bvisa account yeTeregiramu zvachoseZvese iwe zvunofanirwa kuita kubatanidza kune yepamutemo webhusaiti yeakakurumbira mameseji sevhisi, isa iyo foni nhamba inosanganisirwa neaccount kuti ibviswe uye, mushure mekutarisa kwako kuzivikanwa, tinya bhatani kuti ubvise iyo pakarepo account.
Kuti uenderere mberi, zvese kubva kumafoni efoni uye mahwendefa uye kubva kumakomputa, tanga bhurawuza raunowanzoshandisa kuongorora iyo Internet (semuenzaniso. Chrome, safari, Borde nezvimwewo) uye zvakabatana kune ino peji reTeregiramu saiti. Wobva waisa iyo nhamba yefoni yawakanyoresa nayo kuzere yepasirese prefix sevhisi (semuenzaniso. + 39 for Italy) musango Nhare yake uye tinya bhatani Zvadaro, kuti ugamuchire kodhi inodiwa kuti uone kuti ndiwe ani.
Panguva ino, vhura iyo Teregiramu yekushandisa pane chako chishandiso, tinya pane Teregiramu chat uye nyora iyo alphanumeric code yakashuma mukati. Wobva wadzokera kune peji rawavhura, nyora kodhi iri mubvunzo mumunda Code uye tinya bhatani Registrarse.
Pane peji ichangovhurwa, sarudza sarudzo Delete account uye, kana uchida, taura chikonzero nei uchibvisa account yako mumunda Nekuti wave kuenda?. Kune izvi, kana uine chokwadi chekupedzisa ruzivo rwako muTeregiramu, tinya bhatani Delete account, kudzima zvachose account yako neese data rakabatana.
Sezvakataurwa mumitsara yekuvhura yegwara rino, kana iwe ukafunga nezvazvo, hazviite kudzoreredza account yakadzimwa. Zvese zvaunogona kuita kusaina sevhisi zvakare - mune izvo, kana ukasarudza kuzviita uchishandisa iyo imwecheteyo foni nhamba inosangana neaka bviswa account, zvinogona kutora mazuva mashoma. Panyaya iyi, gwara rangu rekuti unganyore sei kuTeregiramu inogona kubatsira.
Maitiro ekudzima Telegiramu account otomatiki
Kana usiri kunyatsogutsikana nezve kudzima account yako yeTeregiramu uye uchida kuziva mhinduro isinganetsi pane iya yandakaratidza mumitsara yapfuura yegwara rino. auto bvisa chirongwa yeprofile yako mushure menguva yekusashanda yakatarwa newe.
Kana iwe uchifunga kuti iyi ndiyo mhinduro yakanakisa pane zvaunoda uye une mudziyo Android, vhura iyo Teregiramu yekushandisa, tinya iyo ☰ bhatani, kumusoro kuruboshwe, uye sarudza sarudzo Configurations mumenyu inovhura. Zvino, tinya pane chinhu Kuvanzika uye kuchengeteka, tsvaga iyo sarudzo Delete my account uye tinya pamusoro chinyorwa Kana kure ne. Pakupedzisira, isa mucherechedzo padyo nesarudzo yekufarira kwako pakati 1 mwedzi, 3 mwedzi, 6 mwedzi mi 1 gore Uye izvo zviri.
Nekudaro, kana uri kushamisika sei kudzima Teregiramu account kubva ku iPhone, tanga iyo application iri mubvunzo, dzvanya pane chinhu Configurations iri mune menyu pazasi uye kubata iyo sarudzo Kuvanzika uye kuchengeteka. Muhwindo idzva rinobuda, tsvaga chikamu Delete account yangu otomatiki, bata chinhu Kana usipo uye sarudza imwe yesarudzo iripo kubva 1 mwedzi, 3 mwedzi, 6 mwedzi mi 12 mwedzi.
Ungade here kuenderera komputa? Mune ino kesi, ramba uchifunga kuti zvinokwanisika kuronga kubviswa kweakaundi yako kubva kuTeregiramu mutengi weWindows uye macOS, asi kwete kubva kuTeregiramu Webhu, iyo vhezheni yeshanduro yeakakurumbira mameseji sevhisi
Nezvo zvakati, tangisa Teregiramu pakombuta yako uye rova ​​iyo icon ye giya giya, kuwana Configurations chenyaya yako. Wobva wasarudza iyo sarudzo Kuvanzika uye kuchengeteka, tsvaga icho chinyorwa Delete my account uye tinya panzira yacho Kana kure ne. Chekupedzisira, isa nguva isina basa yekufarira kwako pakati 1 mwedzi, 3 mwedzi, 6 mwedzi mi 1 gore Uye izvo zviri.
Nekudaro, account yako inozobviswa otomatiki panopera nguva yekusaita yawakaisa. Kuti tinzwisise zviri nani, ngatitorei muenzaniso unoshanda: kana iwe wakagadza isingashandisi nguva yemwedzi mumwe, account yako ichadzimwa kana ukasapinda muTeregiramu kwemazuva makumi matatu. Izvi zvinoreva kuti nguva yega yega iwe yaunoshandisa sevhisi iri kutaurwa, iwe ucha "regedza" kudzimwa kweakaundi yako kwemamwe mazuva makumi matatu.
Kana iwe ukatevera rairo dzandakakupa mundima dzapfuura asi, zvisinei, haugone kudzima account yako, ndinokurudzira kuti ukumbire rutsigiro kubva kuvashandi veTeregiramu.
Kuti uite izvi, zvese kubva kumafoni efoni uye mapiritsi uye kubva kumakomputa, tanga iyo Teregiramu yekushandisa, tinya icon giya giya uye sarudza sarudzo bvunza mubvunzo mi Zvakanaka mune menyu inovhura, kutanga chat neTeregiramu rutsigiro.
Panguva ino, cindezela bhatani tanga, sarudza zvaunosarudza Ndiri kuda kutaura dambudziko mi Ndine dambudziko neaccount yangu, sarudza chinyorwa Ndiri kuda kudzima account yangu uye edza kuisa rairo pachiratidziro.
Kana iwe uchiramba usingakwanise kuzvinyoresa kubva kuTeregiramu, ndokumbira utange chat zvakare nerutsigiro rweTeregiramu uye sarudza sarudzo Svetukira mukati uye uenderere mberi nevanozvipira. mi Ehe nditungamirezve, kuti uwane kusangana chaiko nevashandi veTeregiramu.
Zvino chinyatso tsanangura dambudziko rakasangana mumunda. nyora mesejitinya panebepa remapepa, kutumira meseji yako uye kumirira mhinduro yemushandi weTeregiramu anokupa rubatsiro rwese rwakakodzera.
Maitiro ekuona mafirimu akatoonekwa paNetflix